गजल | BARDIYA ONLINE | | Page 3
गजल: तन यो तिमीले, लुट्यौ पथैमा; सरमै नमानी, मैना चरीको ।
–दिपेन्द्र सुनामी दीप भन लौ कहानी, मैना चरीको । अब भो लगानी, मैना चरीको । तन यो तिमीले, लुट्यौ पथैमा, सरमै नमानी, मैना चरीको । भयछौ अतीनै, बैमान ओहो, यसरी दिवानी, मैना चरीको । कमलो जवानी, भारी बनायौ, तनको निशानी, मैना चरीको । [पूरा पढ्नुहोस्]
गजल : मुस्कुराएर बिरोध गर्ने उसको बानी रहेछ।-हरि प्रकाश भण्डारी
-हरि प्रकाश भण्डारी गजल-१ कमजोरी तिमीमा हुन्छ ममा हुन्छ। तर पनि त आँखामा सपना हुन्छ। बैनी, ब्युटिपालर बन्द गरेर पुस्तक पसल खोल, नारीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी सुन्दरता हुन्छ। श्रीमान कि अदालत बन्द गर्नुहोस कि यो संकार, जब आउँछ गहन बिषय भट्टीमा फैसला हुन्छ। आउनुहोस्- एउटा सामुहिक सेल्फी खिचौ, मृत्युको बिश्वास छैन तस्वीर भोलि सम्झना हुन्छ। उ बहुत रिसाउछे अनि गाली गरेर जान्छे, म [पूरा पढ्नुहोस्]
गजल : फुल टिप्नु छ अनि मन्दिरमा चढाउनु छ
गजल – १ फुल टिप्नु छ अनि मन्दिरमा चढाउनु छ । भोली बिहानै मैले भगवानलाई फकाउनु छ । डाक्टरले आमालाई भगवानको भरमा छाडिदियो, पत्थरलाई ढोगेर आमालाई बचाउनु छ । बा स्वर्गे भएपछि ढुङ्गा कुट्न थाले, बा हुदा भन्नुहुन्थ्यो धेरै पढाउनु छ । यो मन चन्चल बनि उडिदिन्छ भावनामा, आज साथमै राखेर मनलाई संझाउनु छ ।। गजल – २ दिएथे श्रद्दान्जली, पायो कि पाएन । खै मलाई त केहि, खबर आएन । तिमी आफुले आफुलाई, [पूरा पढ्नुहोस्]
भट्टिमा पुग्छ मान्छे घर भन्दा पहिला।-अन्जु स्मारिका
-अन्जु स्मारिका जाडो आएछ हेर च्यादर भन्दा पहिला । भट्टिमा पुग्छ मान्छे घर भन्दा पहिला । बुढा बाआमा बिरामी देखेर छोराले पनि, वकिल बोलायो-डाक्टर भन्दा पहिला । तिमी जुन सिहासनमा बसेर गर्जिदैछौ, लाग्छ तिमी आयौ बाँदर भन्दा पहिला । सद्देलाई मूर्ख देख्छ,सत्यलाई नि झुट, ऊ गाउँमा बसेनछ सहर भन्दा पहिला । महाराजको मुख बिशालु र धारिलो छ, र त वचन लाग्छ खन्जर भन्दा पहिला । [पूरा पढ्नुहोस्]
गजल: सरावको बोतल भर्खर सकिएको बेला
1. के गर्ने छ्यौ हेर्ने नजर सकिएको बेला र हेर्दाहेर्दै तिम्रो अधर सकिएको बेला यो मृत्यु पनि एउटा खेल न हो आखिर अब किन डराउनु डर सकिएको बेला भो मलाई जिन्दगीको पाठ नसिकाऊ जिन्दगी नै जिउने रहर सकिएको बेला फेरि आएर तिमिले यो नसा उतारीदियौ सरावको बोतल भर्खर सकिएको बेला 2. एकाबिहानै एउटा अखबार मिलेको थियो त्यसैमा तिम्रो पनि समचार मिलेको थियो त्यो पनि तिमीले बीच बाटो मै छोडेर आयौ हेर! [पूरा पढ्नुहोस्]
गजल:: हिमालको शिर झुक्दैन कहिले पनि
● किसुन अबिरल हिमालको शिर,झुक्दैन कहिले पनि। मान्छेलाई धनले,पुग्दैन कहिले पनि। सयौँ पटक बोल तिमी ,झुटो कुरा, तर सत्य कुरा,लुक्दैन कहिले पनि। आँशु त मेरो,प्रशान्त महासागर भो, सूर्यको तापले,सुक्दैन कहिले पनि। अरूको इर्ष्या नगरी ,आफ्नै काम गरे, दुनियाँले यहाँ,थुक्दैन कहिले पनि। आफ्नै बाटो खुरूखुरू,हिड्नुपर्छ सधैँ, छाडा कुकुर पनि,भुक्दैन कहिले पनि। बानियाभार, बर्दिया हाल: मलेशिया [पूरा पढ्नुहोस्]
किन पछुताउछौ विगतलाई सम्झेर – निशु जोशी
निशु जोशी नेपालगन्ज किन पछुताउछौ विगतलाई सम्झेर । भविष्य वनाउनुछ वर्तमान हेरेर । नदुख्ने टाउको व्यर्थै किन दुखाउछौ उ जस्तै हरसाँझ मुस्कुराउनु छ हेर । देखेर तिमीलाई इष्र्या गरोस दुनिया देखाउ वरु अझै उ भन्दा राम्रो वनेर । विगत सम्झेर ओभानो घाउ कोट्यायर तस्विर हेरेर समय किन फाल्छौ खेर । एउटा सींगो शक्ति उभिएको सामिप्यमा हेर त्यसैलाई एकचोटि प्रयोग गरेर । News [पूरा पढ्नुहोस्]
उसले यसरी पनि जितेको छ। -सुमन खनाल
सुमनखनाल सँगम बबईनपा–५ बर्दिया उसलेयसरी हारेर पनिजितेको छ । बाजीअन्तै पारेर पनिजितेको छ । आफुलाईठुलो राष्ट्रबादी भन्छउ, छिमेकिकोगुलामिमा चाहारेर पनि जितेकोछ। गरीबजनतालाई माथि उठाउछुभन्दै तिनैजनता मारेर पनिजितेको छ । नबोलिको टुङो छ्, न व्यबहार छ, तैपनीम्याद सारेर पनिजितेको छ । उबाँच्दै बाँच्दैन अब ढल्छभन्छन, जिर्णशरीर घिसारेर पनिजितेको छ । News [पूरा पढ्नुहोस्]
गजल: शिवराज आचार्य’भाबुक’
शिवराज आचार्य’भाबुक’ यो पनि मान्छे हो खुकुरिले भनेन ।लाग्छ मलाई पाप त्यो छुरीले भनेन । उडाएर लग्यो खरको छानो,गरीब छ बिचरा हुरिले भनेन । तड्पाउनु तड्पायो हाडमासु गलायो,बनाउछु नजीक दुरिले भनेन । निर्दोष माथि भएछ उजुर,र् पनि छोड्दे उजुरिले भनेन । साउने झरी तपतपी चुहिरह्यो,छन साना बालबच्चा हुरिले भनेन । News [पूरा पढ्नुहोस्]
गजल / सुमन खनाल संगम
सुमन खनाल संगम बबई न पा, बर्दिया म मेरा सपनाहरु टङगिएको देख्छु। म मेरा खुशीहरु नङगिएको देख्छु। यात्रामा निस्कन्छु ,भेटाउँदैन गन्तव्य, उद्देश्यका बाटाहरु बङगिएको दख्छु। स्वच्छ मन र कर्म होस भन्यो, कर्तव्यका यी हातहरु रङगिएको देख्छु। सुषुप्त छन् स्नायु , अचेतन छ मन, शरीर चलाउन रक्त जङगिएको देख्छु। News [पूरा पढ्नुहोस्]